Anoon Qoraaga Niyad Jabinayn Hadana Nin Rer U Wayn Iyo Islaan Umuliso Ahiba Midna Siduu Wax U Ogyahay Uma Sheego:By: Farah Egal – somalilandtoday.com
Anoon Qoraaga Niyad Jabinayn Hadana Nin Rer U Wayn Iyo Islaan Umuliso Ahiba Midna Siduu Wax U Ogyahay Uma Sheego:By: Farah Egal
Weli fursad uma helin aan ku akhriyo Buuga uu qorray Xirsi Xaaji Xasan ee noloshiisa (Personal memoir).
Marka aad Buug akhridid, waxad kala soo dhex bixi kartaa arragti guud (contextual), sidaa daraadeed arragtidayda Buuga waxan dib ugu dhiganaya akhriskiisa, marka aan fursad u helo.
Dabcan, Buuga xirsi qorray oo sida la sheegay xambaarsan arrimo baddan oo xasaasi ah (sensitive), ama sidoo kale la odhan karro waa sir qarran (state secret), arrimo uu xog-ogaal u ahaa muddadii uu xilka qarran Somaliland u hayey.
Hadii ay dhab tahay qoraalka Buuga lagu soo bandhigay in madaxweeyne Siilaanyo ay la soo deristay xaalad caafimaad oo dhanka da’da la xidhiidha iloowshiinyaha (dementia), taasoo isbedel ku yeelatay qarranka iyo shacabkiisa, sababo baddan oo loo daliilshan karrona ay dalka ku soo korodheen muddadii maamuulkiisa.
Runtii ma aha dhacdo aduunka ku cusub in dadweeynaha laga qarriyo xaaladaha caafimaad ee hogaamiyayaasha.
Waddanka Mareeykanka ayay ka dhacday sanadkii 1893 oo dadweeynaha laga qarriyey xaalada caafimaad ee madaxweeyne Grover Cleveland’s oo kansarka afku ku dhacay, waxa isna sidoo kale xanuunkiisa la qariyey King Richard III oo wax u dhinmeen, waxa iyana sidoo kale dadka laga qarriyey xaaladaha caafimaad ee hogaamiyaal tirra baddan oo Afrikaan ah.
Arrintani waa arrin saamayn baddan ku yeelan doonta hab maamulka Somalialnd, waa arrin u baahan in sharciga qarranka lagu darro (constitution), si loo xaqiijiyo oo loo hubiyo caafimaadka hogaamiyaaysha mustaqbalka.
Aduunku shuruuc ayuu ka leeyahay In baadhitaan caafimaad lagu sameeyo hogaamiyaasha sanadkiiba mar, waana arrin aynu u baahan nahay In aynu abuuro ku dhaqankeeda.
Suaashu waxay tahay –
1- Waa maxay sababta Xirsi u soo bandhigay arrimahan wakhtiga hada lagu Jirro (Motive)
2- Waa maxay ujeedada uu ka leeyahay bandhigideeda (Reasoning)
3- Denbi intee le’eg ayay noqon kartaa?
4- Qayb intee le’eg ayuu Xirsi ku leeyahay dhacdadan heer qarran?
Shakhsiyan ilama haboonayn In uu arrintan ummada la wadaago, waayo waxay cadayn u noqotay tuhun dadku wadda qabeen!
Nin reer u weeyn iyo Islaan umuliso ahiba, sida ay wax u wadda og yihiin, wax uma wadda sheegaan.
Shakhsiyan waxa aan aad u dhaliili jirey xukuumadii siilaanyo iyo hogaankeedii, ilaa hadana waan dhaliilaa, balse arrintan aniga oo tuhunkeeda qaba ayaan hadana ka gaabsan jirrey.
Arragtidayda guud waxan dib ugu dhiganayaa marka aan wadda akhriyo Buuga.
Marnaba igama aha niyad-jebin in aan wax la qorrin, Xirsina waan ku bogaadinayaa Buuga uu sida daaha furran uu usoo bandhigay.